St. Petersburg State University of Telecommunications Nkọwa
Echefukwala atụle St. Petersburg State University of Telecommunications
Idebanye aha na St. Petersburg State University of Telecommunications
taa, mahadum bụ region nnukwu ọzụzụ na nkà mmụta sayensị na mgbagwoju pụrụ iche na ozi teknụzụ na nkwukọrịta.
Isi ubi nke mahadum ọrụ bụ agụmakwụkwọ nke ọkwa dị iche iche nke na-:
abụọ muta (lyceum),
sekọndrị ọrụ aka mmụta (na mahadum na mahadum alaka),
elu-akụziri (18 specialties), Bachelor si na nna ya ukwu degrees (2 ọmụmụ),
post-gụsịrị akwụkwọ na doctoral ọmụmụ.
Iche nke agụmakwụkwọ ka elu:
ọkara oge (mgbede);
akwụkwọ ozi na.
E nwere ihe karịrị 8,000 ụmụ akwụkwọ na mahadum, gụnyere ihe karịrị 6,000 -amụ oge, fọrọ nke nta 1,500 ụmụ akwụkwọ na Saint-Petersburg College of Telecommunications, na ihe karịrị 3,000 ụmụ akwụkwọ na Archangelsk na Smolensk alaka.
The mahadum bụ mpako nke ya nkụzi. Ọtụtụ n'ime ha na-arụ ọrụ na mahadum ruo ọtụtụ iri afọ. fọrọ nke nta 400 ndị mmadụ si 600 nkụzi nwere na nkà mmụta sayensị degrees na utu aha. 75 dọkịta nke sayensị na-ezi ihe n'ụlọ mahadum.
11 ezi ikike iche nke mahadum nwere 43 oche, na kwa oche-ahazi onwe mmụta sayensị na pedagogical otu jikọrọ Ndị nkụzi, na nkà mmụta sayensị ndị ọrụ, na nhazi pesonel, -ekere òkè n'ihe ọzụzụ, methodological, na nkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ.
The size nke mahadum, dị ka nkwurịta okwu na nkà mmụta sayensị na izi mgbagwoju, bụ nnọọ nnukwu: e nwere isii ọmụmụ na laabu ụlọ (ngụkọta ohere bụ ihe karịrị 65,000 square mita), na otu Ụlọ Mgbakọ, ogbako ụlọ nzukọ, Ọtụtụ ọmụmụ na nkà mmụta sayensị laboratories, kọmputa klaasị, na specialized klas. The mahadum nwere n'oge ya mkpofu a zuru mgbagwoju nke akụrụngwa akpọkwa: atọ dormitories maka 1,500 ndị mmadụ, big emega, egwuregwu ụlọ nzukọ, na nkà mmụta sayensị na oru ọbá akwụkwọ ahụ, a dị ike mahadum Internet ọnụ, na ọtụtụ ihe, ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ma ihe dị mkpa na-eme ka mahadum na ihu maka ọdịnihu bụ ihe na nkà mmụta sayensị nwere nke nkụzi, na nkà mmụta sayensị ndị ọrụ, ụmụ akwụkwọ’ ịnụ ọkụ n'obi na ọchịchọ ka ihe ọmụma.
Elu ina maka ndị gụsịrị akwụkwọ na The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications, dị ka nke kacha elu ọzụzụ na nkà mmụta sayensị center, na ana achi achi guzobe mmadụ recourses idobere maka nkwukọrịta, ina maka ndị gụsịrị akwụkwọ na ndị na-eduga Telecommunication ụlọ ọrụ nke region, a nile bụ n'ihi ọrụ mere site nile pesonel nke mahadum, na bụ a nkwa maka ya ike mmepe na-abịa afọ.
Department of Radio N'ikuku, Broadcasting na akpa Ndakọrịta
Department of Radio-mgbasa Ngwaọrụ na Mobile Communications System
Department of TV na Visual Equipment
Department of Radio Systems na Signal nhazi
Department of Desing na Production Radioelectronic Pụtara
Department of Metrology, Standartization na Asambodo
Department of okụre na Special Purpose Communications Equipment
Department of Digital TV na Radio Broadcasting
1930-1941 Formation nke a pụrụ iche na alụmdi agụmakwụkwọ ka elu
October, 1930 - Iwu nke Council of Ndị mmadụ Commissars nke USSR banyere oruru nke Leningrad Electro-ụzụ Institute of Communications (662 ndị mmadụ kwetara ka afọ mbụ ụmụ akwụkwọ).
1931-1941 - Department of mgbede mmụta na-guzosie ike (specialties: radio nkwukọrịta, telephony, na telegraphy). Publishing na nnyocha sayensị ngalaba na-kere. on June 8, 1940 na ulo akwukwo natara a aha ọhụrụ: The Bonch-Bruevich Leningrad Institute of Communication Engineers. Karịrị 40 nkà mmụta sayensị na nyocha oru ngo e rụrụ, karịrị 30 Akwụkwọ na monographs, 50 akụzi ihe, 19 akwụkwọ nkà mmụta sayensị na teknuzu anakọtara isiokwu, na 152 nkà mmụta sayensị na isiokwu e bipụtara; 2,155 ọkachamara gụchara; 21 gụsịrị akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ gbachiteere ha adian. 1,400 ụmụ akwụkwọ na-amụ na ulo akwukwo na 1941; 400 nkụzi na ndị ọzọ ọrụ na-arụ ọrụ; 23 agụmakwụkwọ oche, 40 ọzụzụ na nkà mmụta sayensị na laboratories, na ọzụzụ na mmepụta noo na e kere.
1941-1945 Ọnụ na mba ahụ dum
June-August, 1941 - 70% nke ozizi mkpara, ọrụ, na ụmụ akwụkwọ gara agha n'ihu. Institute oche na hazigharịrị iji mezuo agha choro. Karịrị 300 ụmụ akwụkwọ na ọrụ abuana kwa ụbọchị na-ewu nke nzere nrụnye, 360 ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ pụrụ iche agha nrụnye na Leningrad region. Ọzụzụ na mmepụta noo emepụta mgbọ, ngwá agha mmiri, na redio. Ọzụzụ ọmụmụ maka radio rụọ telegraphists e.
Winter, 1941-1942 - Karịrị 50 nkụzi na ndị ọrụ na nke ulo akwukwo nwụrụ nke agụụ na oyi na-atụ.
1942-January, 1945. - esi kpọpụ mmadụ nile nke ulo akwukwo ka Kislovodsk, mgbe ahụ ka Tbilisi (1942).
July, 1942, Tbilisi - resumption nke ọmụmụ na na ulo akwukwo (471 ụmụ akwụkwọ na oge). 1943 - Establishment of guzobe alaka na Leningrad (181 ụmụ akwụkwọ kwetara).
1944-January, 1945 - Re-esi kpọpụ mmadụ nile nke ulo akwukwo ka Leningrad.
1945 -1993 - The na-eduga nkwurịta okwu alụmdi agụmakwụkwọ ka elu
1945 - Three ikike iche adị: redio nkwukọrịta na radio Broadcasting, nke ekwentị na teligraf nkwukọrịta, na nke mgbede agụmakwụkwọ. Post-gụsịrị akwụkwọ maliteghachiri ọmụmụ. Oche nke agha mmụta na telivishọn research laabu e kere.
1947 - The mbụ na nkà mmụta sayensị na teknuzu ogbako nke ozizi mkpara ẹkenịmde. Site na nke a afọ na ogbako ghọrọ kwa afọ. Ọzụzụ nke ọkachamara maka mba ọzọ na-nyere na ulo akwukwo.
1945-1956 - 83 doctoral na Ph.D. adian e gbachiteere. 52 Akwụkwọ na akụzi ihe e bipụtara. Ọnụ ọgụgụ ụmụ akwụkwọ nke ulo akwukwo bụ banyere 5,000 (1956).
1961-1966 - The guzobe ememe e nyere ya bipụtawa Works nke Communication Institutes (1960). Radio Engineering Faculty na a alaka nke ulo akwukwo (Factory na nka na ụzụ College site The Commintern Research-and-Production Association) E kere 1963. The abụọ ọmụmụ ụlọ na abụọ dormitories (n'ihi na 700 na 600 ndị mmadụ) na-etinye n'ime ọrụ. Institute e nyere nri ga-ekweta na ụmụ akwụkwọ maka ịgbachitere doctoral adian. 89 Ph.D. adian e gbachiteere.
1978-1992 - The Institute gụnyere n'ime ndepụta nke mba na-eduga oru nke elu-akụziri na nkà mmụta sayensị na-arụ ọrụ (1978). Construction nke a ọzụzụ na laabu mgbagwoju na -Atụmanya Bolshevikov malitere. Karịrị 8,500 ụmụ akwụkwọ (na nsonye 300 mba ọzọ ụmụ akwụkwọ) na-amụ na asaa ikike ise specialties (1980). E nwere ihe 600 nkụzi na ndị ọzọ karịa 400 ezi ihe ma na ndutịm ọrụ site na oge.
1993-2013 Inwe mahadum ọnọdụ
1993 - The guzobe nwetara ọnọdụ nke mahadum. New aha bụ: The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications (OTÚ). Development of digital ọmụma na-ekesa na usoro, iwebata eriri-optic nkwurịta okwu edoghi, mmepe nke ozi netwọk, na mobile nkwurịta okwu na netwọk na-kpebisiri ike dị mkpa na nkà mmụta sayensị na ubi.
New oche e kere: nke dijitalụ nhazi nke n'ókè, nke nkwurịta okwu na netwọk, ozi nchekwa nke Telecommunication usoro, nke Biomedical technology, ozi-ijikwa usoro, nke zuru ụwa ọnụ ozi teknụzụ, nke zuru ụwa ọnụ info-nkwurịta okwu na netwọk na usoro.
Saint-Petersburg center nke telekomunikashions e kere na ndabere nke SUT; ọ bụ a pụrụ iche na center maka mma nke nkà na mmughari nke ọkachamara. Department of isi ọmụmụ e kere. Ọ na-enye ọzụzụ nke ọkachamara dị ka "okokporo na nna ya ukwu" usoro. Factory na nka na ụzụ College e reorganized n'ime SUT Institute of Radio Engineering na Electronics. College of Telecommunications gụnyere n'ime Ọdịdị nke SUT.
Archangelsk College of Telecommunications na Smolensk College of Telecommunications ghọrọ alaka SUT. State izi alụmdi Lyceum site SUT e tọrọ ntọala. Institute of ozi teknụzụ (IIT) e kere.
Ị chọrọ atụle St. Petersburg State University of Telecommunications ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
St. Petersburg State University of Telecommunications na Map
photos: St. Petersburg State University of Telecommunications ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke St. Petersburg State University of Telecommunications.